Izindaba - China Used Cars For Export.
Ngokushintshwa kwentengo yokuncintisana, intengo yezimoto ezintsha nezisetshenzisiwe eChina iyaxhuma kancane kancane nemakethe yamazwe omhlaba, ikakhulukazi intengo yezimoto ezisetshenzisiwe ishibhile futhi ishibhile. Vele, izimoto eziningi ezimakethe zezimoto ezisetshenzisiwe ziyathengiswa ngemuva kweminyaka emibili yokushayela. Inkinga yekhwalithi inokwethenjelwa. Izinga lezimoto zaseChina liyathuthuka, futhi amazwe amaningi asathuthuka angathanda izimoto ezishibhile, ezisetshenzisiwe zaseChina.
Akuzona nje izimoto. Eminyakeni engamashumi amathathu edlule, ukusebenza kwezindleko zemikhiqizo yamaShayina bekulokhu kuthuthuka, futhi inani elikhulu lemikhiqizo ehlukahlukene seliqalile ukuthutheleka emakethe yomhlaba, ngentengo isiyonke yehla.
Ngakho-ke yiziphi izinzuzo zezimoto ezisetshenzisiwe eChina?
1. Okokuqala, inezinketho eziningi. Ngokufanayo, intengo yesabelomali semoto entsha ingathenga amamodeli ezinhlobonhlobo zezimoto nokulungiswa, okunenani eliphakeme lokusebenza kwezindleko nezinga eliphakeme lokulungisa kunelemoto entsha.
2. Kuyinto yokonga futhi ilahlekelwe kancane. Ungathenga imoto yesitayela esifanayo uhhafu noma ngaphansi kwemoto entsha.
3. Izinga eliphezulu lokubiyela. Abathengi bangonga imali eningi ngentela yokuthenga izimoto ngokuthenga izimoto ezingamasekeni, futhi akukho ukulahleka ngokuthengiswa kabusha.
4. Izingxenye zifaniswe kahle. Izimoto ezisetshenziswa ngokujwayelekile ziyimodeli eminyakeni emibili kamuva. Imboni yezinsizakalo zezimoto zezingxenye, ubuhle, ukunakekelwa, nezinye izingxenye zemoto ibizwakala futhi ivuthiwe, futhi kunezingxenye eziningi zezimoto. Abanikazi bezimoto ngokuvamile akudingeki bagijimele ukuzothenga izingxenye zemoto.
Imakethe yezimoto esetshenzisiwe eChina
Ngenxa yalezi zinzuzo, imoto esetshenzisiwe ingaba ukonga futhi izenze umnikazi wemoto. Akukho mehluko ekusetshenzisweni kokusebenza phakathi kwemoto esetshenzisiwe nemoto entsha, ngakho-ke eyamasekeni iye yaba yingxenye yokuzikhethela kwabantu. Ngokushesha, imakethe yezimoto esetshenzisiwe ethunyelwa yiChina izovuthwa ngokwengeziwe futhi ibe semgangathweni.
Vele, ngaphambi kokukhipha zonke izimoto zaseChina ezisetshenzisiwe, kufanele senze okulandelayo:
1. Ukulawulwa kwekhwalithi. Imoto ethola ukutholwa kwesixhumanisi, ngaphandle kwezimoto zengozi, izimoto ezilungisa imitha, nezimoto ezingekho emthethweni. Ukulungiswa kwezimoto nokulungiswa kokuzivumelanisa nezimo; ukutholakala kokuthekelisa; imininingwane yemoto iveze.
2. Ukwakhiwa kwepulatifomu. Indali eku-inthanethi nokungaxhunyiwe ku-inthanethi noma ipulatifomu yokuhweba; ipulatifomu yesevisi yokuthumela kwamanye amazwe; izesekeli ukunikezela nokugcinwa kwesikhulumi sokwesekwa kwezobuchwepheshe.
3. Ucwaningo lweMakethe nezomthetho. Imakethe yezimoto ezisetshenziswa phesheya kwezilwandle; imithethonqubo yokungenisa phesheya kwezilwandle; Ukukhethwa kokungenisa phesheya kwezilwandle.
4. Ukulawulwa kobungozi. Ubungozi bempahla; ubungozi bezepolitiki nezenqubomgomo bokungenisa izwe; isilinganiso sokushintshaniswa nobungozi bokuhlala.
Zonke izimoto ezisetshenzisiwe ezithunyelwa eChina azidingi ukuphuma, kodwa futhi zidinga ukwakha uhlelo olwesekelayo lokuhlinzekwa kwezingxenye zokungasebenzi, insizakalo yokuthengisa ngemuva, njll. Kufanele sisungule uhlelo lokusebenza lokuthekelisa umsindo, senze amalungiselelo amahle, futhi sithumele ibhizinisi ku isisekelo esiphansi.
Sizosungula izinhlelo eziyishumi ezinkulu zokuphathwa kwebhizinisi lokuthekelisa: uhlelo lokuqoqa izimoto zasekhaya, uhlelo lokuqapha nokuhlola; uhlelo lokusevisa, uhlelo lweplatifomu yokuhweba nge-e-commerce; uhlelo lokuthengisa lwaphesheya kwezilwandle, ukugcinwa kwempahla, kanye nohlelo lokungena uhlelo lwezinsizakalo zezezimali, uhlelo lokuhlinzeka ngezingxenye zezimoto; uhlelo lwaphesheya kokuthengisa, uhlelo lokulandelela.
IChina ithumela izimoto ezisetshenzisiwe kwamanye amazwe
NgoJulayi 17, 2019, ibhizinisi lokuqala lokuthumela izimoto laseChina elisetshenzisiwe lahamba ngomkhumbi echwebeni laseNansha, eGuangzhou, kumaka ingqophamlando entsha embonini yezimoto yaseChina, ebaluleke ngokomlando.
Ukuthunyelwa kwezimoto kwaseChina kusanda kuqala, kepha njengezimpahla zokugqoka neminye imikhiqizo, ngokusekelwa kwezinqubomgomo, iChina kancane kancane izofinyelela emazweni akhona asetshenzisiwe okuthekelisa izimoto futhi ekugcineni ibe izwe elikhulu kunawo wonke emhlabeni elisetshenzisiwe lokuthumela izimoto. Ngokumiswa kancane kancane kwemakethe, kunezinqubomgomo eziningi neziteshi eziqondile zemboni yezimoto ezisetshenzisiwe eChina. Ngokuzayo, imboni yezimoto esetshenzisiwe izoba imboni eshisa kakhulu.